တနင်္လာနေ့ ညပိုင်းအစီအစဉ် - BBC ပင်မစာမျက်နှာ
]]> BBC Burmese
သတင်းစာတိုက် ကို တိုက်ဖို့ ပြင်သူတွေ ထောင်ကျ
ဒိန်းမတ်နိုင်ငံမှာ ၂၀၀၅ ခုနှစ်က တမန်တော်မိုဟာမက်ရဲ့ ပုံကို ကာတွန်းရုပ်ပြောင်ဆွဲဖော်ပြခဲ့တဲ့ သတင်းစာကို တိုက်ခိုက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ လူလေးဦးကို ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ်စီ တရားရုံးက စီရင်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။တူနီးရှားနိုင်ငံသားတယောက်နဲ့ အာရပ်နိုင်ငံတွေက ရောက်လာပြီး ဆွီဒင်နိုင်ငံသားခံယူထားသူ သုံးဦးတို့ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ ရဲ ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။ ဒီလူတွေဟာ ကိုပင်ဟေဂင်မြို့က Jyllands-Posten သတင်းစာတိုက်ကို ဝင်ရောက်ပြီး တွေ့သမျှလူတွေကို ပစ်သတ်ဖို့ စီစဉ်နေခဲ့တယ်လို့ တရားစွဲ အရာရှိတွေက ဆိုပါတယ်။ထောက်လှမ်းရေးက ဖမ်းယူထားတဲ့ ဒီလူတွေက အချင်းချင်းပြောနေတဲ့ အသံသွင်းချက်တွေမှာ ဘာသာခြားတွေ မယုံကြည်သူတွေကို တွေ့ရင် လည်ချောင်းလှီးပစ်လို့ ပြောနေကြတာကို ကြားရပါတယ်။သူတို့ ပစ်ဒဏ် ကျခံရပြီးချိန်မှာ နိုင်ငံတွင်းက နှင်ထုတ်ဖို့လဲ တရားရုံးက အမိန့်ချခဲ့ပါတယ်။
တီယန်နင်မင် ရင်ပြင်မှာ သေဆုံးခဲ့ရသူတွေ
တီယန်နန်မင် နှစ်ပတ်လည်မှာ တရုတ် ကန့်သတ်မှုတွေ တိုးတရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ ဒီကနေ့ကျရောက်တဲ့ တီယန်နန်မင်ရင်ပြင် ဆန္ဒပြပွဲတွေကို နှမ်နင်းခဲ့တဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့မှာ ဆန္ပပြပွဲတွေ ဖြစ်မလာအောင်အာဏာပိုင်တွေက တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတချို့ကို ထိန်းသိမ်းထားလိုက်ပြီး တချို့ကို တိုးပြီး စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။၁၉၈၉ ခုနှစ်တုန်းက ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဆန္ဒပြပွဲတွေအကြောင်း ဖေ့စ်ဘွတ်နဲ့ တခြား ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေမှာ ရှာဖွေလို့ မရအောင်လဲ အင်တာနက် ရှာဖွေတဲ့ စကားလုံးတွေကို တိုးပြီး ကန့်သတ်ထားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်က အဲဒီဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး အခုအထိဖမ်းဆီးထားသူ အားလုံး လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုလဲ တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီတုန်းက တရုတ်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ပြင်းထန်တဲ့ နှိမ်နင်းမ၍ကြောင့် အပြစ်မဲ့ အသက်တွေ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဝမ်းနည်းစရာလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ပြောလိုက်ပါတယ်။မြန်မာသတင်းများ- ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့မှာ ဇွန်လ ၃ ရက်နေ့က သံတွဲမြို့က ပြန်လာတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ လိုက်ပါလာတဲ့ ကားကို လူအုပ်က ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်လို့ လူ ဆယ်ဦး သေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ သေဆုံးသူတွေဟာ တခြားဒေသက လာကြသူတွေလဲ ပါတယ်လို့ သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းက ရမ်းဗြဲမြို့နယ်ကျောက်နီမော်ကျေးရွာအုပ်စုမှာ ရခိုင်မျိုးသမီးတဦးကို အဓမ္မကျင့်ပြီး သတ်ဖြတ်မှုတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဟာ မူဆလင်တွေဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ဒေသအတွင်းမှာ တင်းမာမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်။ နောက်ထပ်သီးခြားဖြစ်စဉ်တခုမှာတော့ စစ်တွေမြို့မှာ စျေးခွန်ကောက်တဲ့ ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတချို့က သူတို့အတွက် လိုက်ပါကူညီပေးနေတဲ့ ရခိုင်ပါတီက စည်းရုံးရေးမှုးတယောက် အသတ်ခံရတယ်လို့ သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ လူအုပ်ကြီးက စစ်တွေ ရဲစခန်းကို သွားဝိုင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ရဲက လူစုခွဲတဲ့ အနေနဲ့ ပစ်ခတ်လို့ ၁၁ ယောက် ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။- e-Government ဖြစ်လာဖို့ ဘယ်လောက်နီးစပ်ပြီလဲအပတ်စဉ် အစီအစဉ်များ- Cool-Tech: Google ရဲ့ လုပ်ငန်းခွင်- တပတ်အတွင်း အားကစား သတင်းပဒေသာ - ကိုဇေယျာဖြိုး တင်ဆက်ထားသည်။ဘီဘီစီ အစီအစဉ်တွေကို နားဆင်ပြီး သောတရှင်တွေရဲ့ ဝေဖန်အကြံပြုချက်တွေ ပေးပို့ကြ ပါလို့ ဖိတ်ခေါ် ပါတယ်။
ကူးလ်တက် - လေယာဉ်ပြေးလမ်း အဝိုင်း
ဘီဘီစီ လမ်းညွှန် News News Sport Weather Radio Arts သုံးစွဲမှု စည်းကမ်းချက်များ ဘီဘီစီအကြောင်း ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက် မူဝါဒ ကွတ်ကီးစ် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှုဆိုင်ရာ အကူအညီ? မိဘ အုပ်ထိန်းမှု လမ်းညွှန် ဘီဘီစီကို ဆက်သွယ်ရန် ဒီဆိုဒ်မှာ ကြော်ငြာထည့်မယ် ကြော်ငြာ ရွေးချယ်မယ် Copyright © 2017 ဘီဘီစီ. ပြင်ပဝက်ဘ်ဆိုက်များမှ အကြောင်းအရာများကို ဘီဘီစီမှ တာဝန်မယူပါ။ ပြင်ပ လင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့် ကျွန်ုပ်တို့ ချဉ်းကပ်မှု/ လင့်ဆိုင်ရာ မူဝါဒ